Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano Supa Bowl! | Martech Zone
Arbacada, Janaayo 31, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Wiilkeyga, Bill, iyo saaxiibkiis, Jared, ayaa lambarkaan yar isla geeyay toddobaadkan… “We Goin to da Supa Bowl!” Bill waa gitaar iyo iskudhaf, Jared waa codka cajiibka ah, Katie-na wax yar oo gurmad ah ayey heestaa.
Tani waxaa loogu talagalay asxaabteyda kor jooga Colts, Pat iyo AJ. Wiilkaygu runtii wuu ku fiican yahay waxyaalahan! Hadaad jeceshahay, waad ka soo dagsan kartaa halkan:
Cocaine iyo Blogging
Febraayo 1, 2007 saacadu markay tahay 9: 57 AM
Aad u qabow! Haddii aanan sifiican u ogaan, waxaan u maleynayaa inay taasi ahayd Satch 🙂